बालमैत्री वडा भित्र बालबालिकाको अवस्था यस्तो छ ?
By vijayafm on	 March 27, 2019 कोरोना अपडेट, नमुना ग्राम सञ्चार अभियान, फोटो फिचर, श्रीधर उपाध्याय, स्थानीय
गैँडाकोट । गैँडाकोट नगरपालिका वाड नं. १ नगरको पहिलो बालमैत्री वडा बन्न सफल भएको छ । शनिबार गैँडाकोट नगरप्रमुख छत्रराज पौडेलले गैँडाकोट १ बालमैत्री वडा भएको घोषणा गर्नुभएको छ । घोषणा सभा कार्यक्रममा बोल्दै नगरप्रमुख पौडेलले गैँडाकोट १ फस्ट भएको बताउनुभयो । वडाको ऐतिहासिक कदम अन्य वडाका लागि सन्देश रहेको पौडेलले बताउनुभयो । वि.सं. २०७४ साल माघ १९ गतेबाट बालमैत्री अभियान सुरु भएको थियो । एक वर्षको दौरानमा वडालाई बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको छ । गैँडाकोट १ ले बालमैत्री वडा घोषणा मात्र होइन घोषणा पश्चातको रणनीतिक योजना समेत बनाएको छ । बालमैत्री स्थानीय शासनले तोकेको ३९ वटा सूचक र वडास्तरमा तय गरिएको ३ वटा सूचक गरी ४२ वटा सूचक पुरा गरी बालमैत्री वडाका लागि आवश्यक सूचकांक पुरा गरिएको थियो ।
गैँडाकोट नगरपालिका वडा नं. १ ले जारी गरेको बालबालिकाको स्थति पत्र २०७५ का अनुसार गैँडाकोट १ मा २ हजार २ सय ५ जना बालबालिका रहेका छन् । गैँडाकोट १ को सबै भन्दा राम्रो पक्ष श्रमिक बालबालिका शुन्य रहेको छ । प्रहरीको रिपोर्ट अनुसार कुनै पनि बालबालिका श्रमिक नरहेको बाल संरक्षण समितिका सदस्य जगन्नाथ उपाध्यायले बताउनुभयो । यसैगरी वडामा सडक बालबालिकाको अवस्था समेत शुन्य रहेको छ । १८ वर्ष मुनिकालाई बालबालिकाको रुपमा हेरिन्छ । वडामा बाल विवाहको अवस्था यस आर्थिक अवस्थामा शुन्य रहेको छ । यस अघि २०७३÷७४ मा ६४ वटा विवाहमा ४ वटा विवाह बालविवाह भेटिएको थियो । बालमैत्री अभियानले यसको न्यूनिकरण गरेको छ । बालविवाह गर्न हुँदैन भन्ने सकरात्मक सन्देशले शतप्रतिशत सफलता प्राप्त भएको गैँडाकोट १ का वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो ।
बालमैत्री अभियानका सन्दर्भमा वडा भित्र धुम्रपानमा फसेका केही बालबालिका भेटिएपनि अहिले भने नशालु पदार्थ सेवन गर्ने परिपाटि निस्तेज पारिएको वडाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । वडामा ९ वटा शिक्षण संस्था छन् भने सबै बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा रहेका छन् । वडाका केही विपन्न घरपरिवारमा केही कुपोषणको अवस्था देखिएपछि वडाले केही सूचक थप समेत गरी काम गरेको थियो । वडामा १५ सय ५ घरधुरी मध्ये १४ सय ३४ घरमा पोषण युक्त खाना प्राप्त गर्ने गरेको भेटिएको थियो । ७१ घरमा पोषणयुक्त खाना र केही घरमा आयोडिन नुन प्रयोगमा नल्याएको देखेपछि । आयोडिन नुनका बारेमा विभिन्न सचेतनात्मक कार्यक्रम वडाले गरेको र अहिले सुधार आएको बाल संरक्षण समिति सदस्य जगन्नाथ उपाध्यायले बताउनुभयो । वडामा १५ सय ५ घरघुरीमध्ये १० घरमा आयोडीन प्रयोग नगरेको अध्ययनले देखाएको थियो ।
बालमैत्री अभियान सुरु गर्नुपूर्व अभिभावकमा बालबालिको जन्मदर्ता नगराउने, ढिलो गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको थियो । घरधुरी सर्भेक्षणमा २०७४ अनुसार ३७ जनाको जन्मदर्ता नभएको पाइएकोमा २०७५ पौष मसान्तसम्म आइपुग्दा पुराना सम्पूर्ण गरि नयाँ बालबालिकाको पनि जन्म दर्ता भएको वडा कार्यालयको पञ्जीकरण दर्तामा उल्लेख समेत रहेको छ ।
बालबालिकाले गल्ती गरेमा गाली गर्ने हप्काउने तर्साउने संस्कारको सुधार बालमैत्री अभियानले ल्याएको देखिन्छ । वडाले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार कूल घरधुरीमा १२ सय २५ घरधुरीमा बालबालिकालाई सम्झाउने गरेको देखिन्छ । यसैगरी कोठामा थुन्ने, खानामा बन्देज लगाउने, यातना दिने प्रवृत्ति शून्यमा झरेको छ । अझै पनि केही परिवार बालबालिकालाई गल्तीमा गाली थर्काउने गरेको देखिन्छ । यसको न्यूनिकरणका लागि बालमैत्री अभियानको निरन्तरता आवश्यक देखिएको स्थानीयको भनाइ समेत रहेको छ ।
बालमैत्री अभियानको सबै भन्दा राम्रो पक्ष भनेको वडामा खोप तर्फ पूर्ण खोपको उपलब्धी हासिल भएको वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो । संस्थागत संरक्षणमा रहेका बालबालिकाहरुको संख्या पनि वडामा रहेको छ । संस्थागत संरक्षणमा करिब ६० जना विद्यार्थी रहेका छन् । यीनीहरुको सर्वाङ्गिण विकासमा वडाको भूमिका अझै पनि जरुरी रहेको छ ।
वडामा कुनै पनि बालबालिकामा एच आइभि संक्रमण देखिदैन । यो अर्को राम्रो पक्ष हो । भोैतिक पूर्वाधार तर्फ पनि वडाका घरहर सचेत बन्देै गएका छन् । वडामा कूल घरघुरीमध्ये १०८५ घरमा बालमैत्री धारा रहेका छन् । यसमा अझै सुधारको आवश्यकता छ । यसैगरी वडाले सबै भन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने र निरन्तरताका लागि सचेत बन्नुपर्ने भनेको बालमैत्री शौचालय हो । अध्ययन अनुसार ५९६ मा घरमा बालमैत्री शौचालय र ६१६ घरमा बालमैत्री शौचालय नभेटिएको अध्ययनले देखाएको थियो ।
जोखिममा पर्न सक्ने बालबालिकाहरुलाई जोखिममा पर्न नदिन र परिसकेका बालबालिकाहरुलाई त्यहाँबाट निकाल्न सामाजिक सुरक्षाको उपाय मध्येकै एक उपाय बाल संरक्षण कोष स्थापना र सञ्चालन गर्न निर्देशीका बनाएको छ । यस कोषले टुहुरा तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाको सहयोगार्थ अक्षयकोष स्थापना गरीरहेको छ । बालम संरक्षणा समितिका सदस्य तथा बालममैत्री अभियन्ता जगन्नाथ उपाध्यायका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा १० लाखको कोष खडा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
बाल संरक्षणकोषमा न्यूनतम ५ लाख रुपैँया भएपछि लक्षित बालबालिकालाई प्रति महिना तीन सयका दरले वार्षिक ३६ सय सहयोग गर्नेछ ।
बालमैत्री वडाको निरन्तरताका लागि वडाले योजना बनाएको छ । निरन्तरताका लागि बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल सहभागिता, संस्थागत सूचकहरुलाई मध्यनजर गरेर रणनीतिक योजनाका साथै अनुमानित बजेट समेत निक्र्योल गरेको छ ।